गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » चोटपटक–दुर्घटनाबाट बच्न, नाफा कमाउन भोलि विश्वकर्मा पूजामा बिहानै गर्नुहोस् यी कार्य
काठमाडौ । भगवान विश्वकर्माको सम्मानका साथ सबैमाझ साझा गरे प्राप्त हुनेछ कृपा ।
भोलि असोज महिनाको १ गते अर्थात कन्या संक्रान्तिलाई निर्माण तथा प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान श्री विश्वकर्मा बाबाको पूजाका रुपमा पनि मनाउने गरिन्छ ।
यो दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्विहरू उहाँ विश्वकर्मा बाबाको सम्मानमा पूजाआजा गर्ने गर्दछन् । विश्वकर्मा बाबा देवताहरुकालागि शिल्प विशेषज्ञ र हरेक देवताका भवनहरुको निर्माता, हतियार शिल्पकार र यानहरुका रचयिता तथा निर्माता हुनुहुन्छ ।
शास्त्रहरुका अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्माका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँकी एकमात्र सन्तान छोरी सन्ध्याको विवाह वैश्विक उर्जा तथा तापका प्राकृतिक श्रोतका मालिक भगवान सूर्यसंग भएको थियो ।
विश्वकर्मा बाबा हस्तकला, शिल्पकार, हतियारविज्ञका रुपमा कला अनि हजारौं वस्तुगत रचनाका प्रेरणा हुनुहुन्छ । यो दिन आधूनिक यूगमा पनि उहाँले वैदिक कालमा गरेको प्रविधि तथा अनेक निर्माणका अभ्यासहरूको सम्मान स्वरूप नेपाल, भारत लगायत विश्वभरका अधिकांश ग्यारेज, कारखाना, उत्पादन प्रविधि स्थल अनि धातूका विविध कार्यहरूमा सक्रिय विविध कार्यस्थलहरु एकदमै सजिसजाउ अनि झकिझकाउ हुने गर्दछन ।
विश्वकर्मा बाबाको पूजामा विश्वकर्मा बाबाको मुर्ती स्थापित गरि उक्त दिन पुजा गर्ने र भोलिपल्ट रितिपूर्वक नदी, ताल, तलैयामा मुर्ती सेलाउने चलन छ । यो दिन यातायातका साधनहरुको विशेष पुजा गरिन्छ तसर्थ यो दिन सार्वजनिक यातायातका साधनहरु सहज उपलब्ध नहुन सक्दछन ।
मानव जीवनका हरेक यन्त्र तथा यान्त्रीक उपलब्धि हामीलाई सधैं फापोस अनि दूर्घटनाबाट सुरक्षा मिलोस भन्ने कामना तथा विश्वास लिइन्छ । विश्वकर्मा बाबाको रिपूर्वक पूजा गरे दुर्घटना, चोटपकटबाट बच्नुका साथै प्रविधिको प्रयोगबाट नाफा कमाउन सकिने विश्वास गरिन्छ ।
विश्वकर्मा बाबाको पूजाको तयारी देशभरीनै सूरु भएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा– १ स्थित बिक्रीका लागि राखिएको विश्वकर्मा बाबाका यी मूर्तीलेपनि त्यो संकेत गर्दछ ।
यहाँ रु दुई हजार देखि पाँच हजारसम्ममा माटोबाट निर्माण गरिएको कलात्मक विश्वकर्माको मूर्ति बिक्री हुने गरेको छ । काठमाडौमापनि विश्वकर्मा पूजा विशेष बजार लागेको देखिन्छ ।
हरेक चाड–पर्वको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छ । हरेक पर्व मनाउनुको पछाडि त्यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण हुन्छन् । वैज्ञानिक कारण हुन्छन् । विश्वकर्मा पूजा भन्नसाथ हामी विभिन्न कलकारखाना, पार्टपूर्जा, यन्त्रको पूजाआजा गर्छौं । आखिर किन यसो गरिएको होला ?
हरेक वर्ष कन्या संक्रान्तिको दिनमा अर्थात १७ सेप्टेम्बरमा विश्वकर्मा पूजा गरिन्छ । यो दिन भगवान विश्वकर्माको जन्म भएको थियो यसैले यस दिनलाई विश्वकर्मा जयन्ती पनि भनिन्छ । नेपाल लगायत भारतमा विश्वकर्मा पूजा उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाइन्छ ।
विश्वकर्मा भगवान को हुनुहुन्छ ?
भगवान महादेवले ब्रहृमा र विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको भिन्न भिन्नै जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । सृष्टिको सृजना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन ब्रहृमाले आफ्नो वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिनुभयो ।
विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ । उहाँले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गर्नुभएको हो ।
भगवान विश्वकर्माको महत्व यो कुराले पनि स्मरण सकिन्छ कि उहाँको महत्वको वर्णन ऋग्वेदमा ११ ऋचाहरु लेखेर गरिएको छ । उहाँको अनन्त र अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेतायुगमा लंका, द्वापयुगमा द्वारिका र कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मुर्ती आदि रहेका छन् ।
जसको सम्पूर्ण सृष्टि र कर्म व्यापार हो उहाँहहरु विश्वकर्मा हुन् । सजिलो भाषामा भन्ने हो भने सम्पूर्ण सृष्टिमा जुन पनि कर्म सृजनात्मक हो जुन कामले जीवको जीवन सञ्चालित हुन्छ । उहाँहरु सबैको मुल विश्वकर्मा हो । त्यसैले उहाँको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक उर्जा दिन्छ र काममा आउने सबै बाधा अड्चनहरुलाई तोडिदिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।